Best ụzọ na-ege ntị Spotify music for free na-enweghị Spotify mgbasa ozi h
Spotify, doro anya, bụ otu n'ime ihe ndị kasị mmasị nke taa music gụgharia ọrụ na ya ad akwado version, ọtụtụ n'ime anyị na-enwe-ege egwú na ya maka free enweghị-atụkwasị uche ihe ad ma ọ bụ abụọ na n'etiti tracks na-egwuri.
Otú ọ dị, e nweghị ịgọnahụ eziokwu na ndị obere mgbasa ozi nwere ike ịbụ a bit nke a downer ọ bụrụ na e nwere a ọzọ na ha nọ na-interrupting gị ọzọ music. Kere idaha mgbe gị na ndị enyi gị na-enwe oké oge swooning ka mma music na niile a na mberede ihe ad n'ihi na, ka na-ekwu, a ụgbọ ala ụlọ ọrụ yiri mgbaaka na onye ọ bụla ntị.
Ugbu a, nke ga-abụ a nnukwu dampener niile na otu nke na ị ga-achọ izere mgbe ọ bụla na-eri. Ọfọn, otú anyị malitere nnyocha na a echiche na ọ ghaghị ịbụ a ụzọ nke ọnọdụ a. Anyị chọrọ iji chọpụta ụzọ dị iche iche nke-ege egwú na Spotify na-enweghị mgbasa ozi nke mere na music na ọzọ n'anya na i nwere ike na-enwe ma nwere oké ahụmahụ.
Were a anya ihe anyị hụrụ dị ka e n'okpuru, anyị ji n'aka na ị ga-amasị ya.
1.How na-ege ntị Spotify music free enweghị Spotify mgbasa ozi
Part 1.Solution: Nweta nkwalite gị free ndenye aha nke Spotify ka a ikpe nke na-akwụ ụgwọ ọrụ
Part 2.Solution: Iwepụ mgbasa ozi si free version nke Spotify ngwa site na njikọ site a proxy nkesa
Part 3.Solution: Denye aha na Spotify na-gị na akaụntụ oghe
Ngwọta 1: Nweta nkwalite gị free ndenye aha nke Spotify ka a ikpe nke na-akwụ ụgwọ ọrụ
Ugbu a, nke a bụ otu nke mfe ụzọ nke na-agbalị si Spotify na-enweghị mgbasa ozi na niile, dị nnọọ nweta nkwalite akaụntụ gị na Spotify ka a ọnwa nke adịchaghị ọrụ maka free.
Ihe niile i nwere ime bụ nbanye akaụntụ gị na Spotify wee pịa na nhọrọ 'ọjọọ'.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na nhọrọ 'Malite free 30-ụbọchị ikpe' nakwa na ọ bụ ya.
2.Solution 2: Iwepụ mgbasa ozi si free version nke Spotify ngwa site na njikọ site a proxy nkesa
Ọ bụ ezie na nke a abụghị n'ụzọ doro anya a Spotify nabatara usoro nke wepụ mgbasa ozi Otú ọ dị a otutu nke onye ọrụ na anyị ekwuwo okwu na gbalịrị na-anwale na-agba ọsọ Spotify na a proxy nkesa na maa ihe, ha bụ ndị ịga nke ọma!
Na mfe okwu o kwere omume, a proxy nkesa na-bụ a na kọmputa na-ejikọ gị na desktọọpụ / laptọọpụ ọzọ na kọmputa netwọk ọrụ. Na ndị ọzọ okwu, i nwere ike na-anọdụ Japan, a mba ebe Spotify adịghị ulo oru ma na iji a proxy nkesa na ị ka nwere ike na-agba ọsọ Spotify.
Ihe mbụ na-eme bụ iji nweta a nkesa; anyị nwere ike ikwu na ị na-na-otu na US. DigitalOcean bụ a na-atụ aro proxy nkesa na-eweta na ọ bụ otu n'ime ndị dị ọnụ ala karịa nhọrọ dị ka mma. Mepụta akaụntụ gị site na ịpị ebe a. Na-etinye ihe ọ bụla na hostname na nanị ahapụ ndị fọdụrụ ka ọ bụ.
Ị kwesịrị ị na ugbu a-enweta ihe email n'oge na-adịghị nke nwere paswọọdụ maka ịnweta gị na ihe nkesa na banyere 60 sekọnd ma ọ bụ otú ahụ, ọ ga-abụ na-agba ọsọ.
Mepụta a proxy - SOCKv5
Iji ike na proxy, ị ga-enwe OpenSSH arụnyere. Ọ na-abịa dị ka ndabere na Mac OS X na Linux. Iji na-esi gị proxy kere, na-agba ọsọ na-esonụ:
Dochie XXXX na IP dị ka e nyere na email zitere gị si DigitalOcean na Tinye paswọọdụ gị mgbe ọ na-rịọrọ. Nke a kwesịrị inwe a proxy nkesa na-agba ọsọ n'ihi na ị.
Mbido kọmputa gị
Ugbu a, Mbido sọks proxy ilebara 127.0.0.1 nakwa dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na 8080. Ọ bụrụ na ị na-eji Mozilla Firefox, ị ga-enwe ike ịtọ a elu dị maka nchọgharị. A bụ otú eme ya na Mozilla Firefox.
Gaa na menu na akara ngosi na Firefox wee pịa on Nhọrọ.
Ugbu a, site Nhọrọ menu, họrọ Advanced dị ka e gosiri n'okpuru screenshot.
Ozugbo Advanced nhọrọ na-emeghe n'ihi unu, họrọ Network taabụ ma pịa bọtịnụ Ntọala.
Na-esote ihuenyo maka Njikọ ntọala, họrọ nhọrọ nke Manual proxy nhazi.
Ugbu a, tinye proxy ọmụma dị ka e na email site DigitalOcean na iti OK. Gbaa mbọ hụ na ị họrọ na redio bọtịnụ maka SOCKv5.
Mepụta akaụntụ gị na Spotify n'ikpeazụ
Ozugbo i ịtọ proxy nkesa ịga nke ọma, ịnweta Spotify website na aha n'ebe ahụ. Mgbe eke gị Spotify akaụntụ, gaa na console na ị na-eji na-agba ọsọ iwu mbụ ma pịa Ctrl + C, na proxy nkesa kwesịrị ugbu a-akwụsị. Ọzọkwa, gaa na ntọala na Firefox ma họrọ nhọrọ nke 'Ọ dịghị Proxy'.
Na ihe nile nke n'elu mere n'ụzọ ziri ezi, naanị ihe fọdụrụ ka a mere bụ n'ihi na ị na melite gị ugwo usoro on Spotify na hazi ya. Pịa ebe a iji eme na na n'ebe ahụ ka ị na-aga, ugbu a, ị pụrụ ịnụ ụtọ Spotify nnọọ ad free.
Ngwọta 3: Denye aha na Spotify na-gị na akaụntụ oghe
Nke ahụ dị mma; ụzọ kasị mma ị hụ na ị na-anụ ụtọ ebre music on Spotify na-enweghị mgbasa ozi na niile bụ site n'idebe gị na akaụntụ oghe na-arụsi ọrụ na ọbụna mgbe mbụ 30 ụbọchị free ndenye aha bụ n'elu. Ị ga-enwe iji hụ na ịgba ụgwọ gị ọmụma n'ụzọ ziri ezi banyere n'ime gị Spotify akaụntụ mere na ha pụrụ ịgbanye ụgwọ gị maka adịchaghị ugwo ndenye aha ha. Ọzọkwa, echefula na Spotify prefers inye a free ọnwa nke na ndenye aha naanị ndị na-na ya nwere debanyere aha.
Olileanya na unu ga-enwe n'elu nhọrọ nke na-ege ntị Spotify music for free na enweghị ihe ọ bụla Spotify mgbasa ozi.
> Resource> Music> Best Ụzọ na-ege ntị Spotify Music Free na-enweghị Spotify Mgbasa ozi